အပြာရောင်ဝေလငါး - ဝီကီပီးဒီးယား
ဝေလငါးပြာ (သို့) အပြာရောင်ဝေလငါး
Temporal range: Pleistocene ခေတ်ဦး - လက်ရှိခေတ် 1.5–0 Ma
ပျမ်းမျှ လူသားတစ်ဦး၏အရွယ်အစားနှင့် အပြာရောင်ဝေလငါးအား နှိုင်းယှဉ်ပြထားပုံ
* B. m. brevicauda Ichihara, 1966
အပြာရောင်ဝေလငါးများ ကျက်စားရာ ဒေသများ (အပြာရောင်ခြယ်)
ဝေလငါးပြာ (သို့) အပြာရောင်ဝေလငါးသည် မစ္စတစ္စီတိုင် (Mysticeti) မျိုးစဉ်၏ အောက်မျိုးစဉ်ငယ်တစ်ခုဖြစ်သည့် ဘလင်းဝေလမျိုးထဲတွင် ပါဝင်သော အဏ္ဏဝါ-နို့တိုက်သတ္တဝါ မျိုးစိတ်တစ်ခု ဖြစ်၏။ ဝေလငါးပြာတစ်ကောင်၏ ခန္ဓာကိုယ် ပျမ်းမျှအရှည်မှာ ၉၈ ပေ (၃၀ မီတာ) ရှိပြီး ပျမ်းမျှအလေးချိန်မှာ တန်ချိန်ပေါင်း ၁၉၉ တန်ခန့်ပင်ရှိသည်ဟုသိရသည်။ ပြောရမည်ဆိုလျှင် ဝေလငါးပြာသည် ရှင်သန်တည်ရှိနေဆဲ တိရစ္ဆာန်များရော ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့် ရှင်သန်တည်ရှိခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရသမျှ တိရစ္ဆာန်များအပါ အားလုံးသော တိရစ္ဆာန်များထဲ၌ အကြီးမားဆုံးတိရစ္ဆာန် ဖြစ်သည်။ အပြာရောင်ဝေလငါး၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် ရှည်လျားသွယ်လျပြီး အရောင်သည် ခပ်မွဲမွဲ ညိုပြာရောင်သန်းနေပြီး ကိုယ်ထည် အောက်ဘက်၌ အရောင်အနည်းငယ်ဖျော့သည်။
အပြာရောင်ဝေလငါးသည် အစာကို စစ်ထုတ်စားသောက်သော တိရစ္ဆာန် (Filter Feeder) ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့စားသောက်သည့် အစာအများစုမှာ ပုစွန်ဆိပ်လေးများဖြစ်သည်။ ဝေလငါးများသည် အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ရန် အသံလှိုင်းအသုံးပြု၍ (အသံထွက်၍) ဆက်သွယ်ကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့လူသားများ ယခင်ထဲက သိထားနှင့်ပြီးဖြစ်၏။ ထိုသို့ ဆက်သွယ်ရာ၌ ဝေလငါး မျိုးစိတ်တစ်ခုနှင့် တစ်ခု အသုံးပြုသည့် အသံလှိုင်းကြိမ်နှုန်းများ မတူညီကြသည်ဖြစ်ရာ ဝေလငါးပြာတို့၏ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ရာ၌ ထုတ်လွှင့်မှုသည် ပျမ်းမျှအသံလှိုင်းကြိမ်နှုန်းမှာ (၈ - ၂၅ ဟက်ဇ်) အတွင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ သို့ရာတွင် ဒေသ၊ ရာသီဥတု၊ အပြုအမူတစ်ခုစီအလိုက် ကွဲပြားနိုင်သည်။
အပြာရောင် ဝေလငါးသည် ၁၉ ရာစုအကုန်အထိ ကမ္ဘာ၏ သမုဒ္ဒရာများအားလုံးနီးပါးတွင် တစ်ချိန်က ပေါများခဲ့သည်။ ၁၉၆၆ ခုနှစ်၌ နိင်ငံတကာ ဝေလငါးဖမ်းယူမှု ကော်မရှင် ကိုယ်တိုင်က ဝေလငါးပြာ အမဲလိုက်ခြင်းကို တားမြစ်ရသည့်အထိ မျိုးသုဉ်းလုနီးပါး အပြာရောင်ဝေလငါးများသည် အမဲလိုက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ အပြာရောင် ဝေလငါးများကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ မျိုးသုဉ်းရန် အန္တရာယ်ရှိသော မျိုးစိတ် အဖြစ် နိုင်ငံတကာ သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး အသင်းမှ သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ လူလုပ်အန္တရာယ်(သင်္ဘောတိုက်ခိုက်မှု၊ လေထုညစ်ညမ်းမှု၊ သမုဒ္ဒရာ ဆူညံသံနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု) နှင့် သဘာဝအန္တရာယ်(လူသတ်ဝေလငါး ဖမ်းဆီးခြင်း) တို့၏ ခြိမ်းခြောက်မှုများစွာကို ဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်သည်။
" အပြာရောင်ဝေလငါးသည် ရှင်သန်တည်ရှိနေဆဲ တိရစ္ဆာန်များရော ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့် ရှင်သန်တည်ရှိခဲ့ကြကြောင်းသိရသမျှ တိရစ္ဆာန်များအပါ အားလုံးထဲတွင် အကြီးမားဆုံးဖြစ်သည် "
၂.၂ အစားအသောက်နှင့် အစာရှာဖွေမှု
အနောက်ဘက်တွင်ရှိနေသော တောင်ပံအသေးလေးကို ပုံ၏ဘယ်အစွန်နားတွင် မြင်တွေ့နိုင်သည်။
ပုံမှန်အမြင်တွင် ဝေလငါးပြာများ၏ အရောင်မှာ ခပ်မွဲမွဲ မီးခိုရောင်သန်းနေသည့် အပြာရောင်မျိုးဖြစ်ပြီး ရေထဲတွင်မူ အပြာရောင်အဖြစ် မြင်တွေ့ရသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် အမဲစက်များ ပါရှိတတ်ကြပြီး ၎င်းအမည်းစက်၏ ပုံစံသည် မကြာခဏပြောင်းလဲတတ်သည်ဟု သိရသည်။ သို့ရာတွင် တစ်ဦးချင်းစီကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သော အမြီး ရေယက်တောင်၏ နောက်ကျောတစ်လျှောက်တွင် တစ်ကောင်ချင်းစီတွင် မတူညီကြသည့် ထူးခြားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာ အရောင်ခြယ်မှုပုံစံတစ်ခုရှိသည်။
ဝေလငါးများသည် နေရာရွေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းဖြင့် ကပ်ပါးပိုးများ၊ ရောဂါပိုးများနှင့် ၎င်းတို့ချင်း ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ရမှုကို စသည့် အန္တရာယ် ရှောင်ရှားရန်၊ နွေဦးနှင့် နွေရာသီတွင် ၎င်းတို့၏ အစာ သားကောင်ငယ်များ ရရှိနိုင်ရန်၊ သားသတ်ဝေလငါးများ၏ အမဲလိုက်မှုကြောင့် သားပေါက်ဦးရေလျှော့ပါးခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် စသည်တို့အတွက် ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု အဏ္ဏဝါနှင့် သတ္တဗေဒပညာရှင်များက ယူဆထားသည်။
အပြာရောင်ဝေလငါး၏ အစားအစာတွင် အများဆုံးမှာ ခရေးလ် ဟုခေါ်သော ပုစွန်ဆိပ်လေးများဖြစ်သည်။ အပြာရောင်ဝေလငါးများကို မဂ်ဒလီနာ ပင်လယ်အော်နှင့် မက္ကစီကိုနိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်တွင် ရှိတတ်သော ကဏန်းနီများကိုလည်း စားလေ့ရှိသည်ကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ဖူးသည်ဟု သိရသည်။
အပြာရောင်ဝေလငါးများ၏ အသံထုတ်လွှင့် ခေါ်ဆိုမှုများသည် အောက်ပါအကြောင်းရင်းများကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်ဟု သုတေသနပြုလုပ်နေကြသည့် ပညာရှင်များမှ ယူဆထားကြသည် -
သွားလာရာတွင် တစ်ကောင်ချင်း အကွာအဝေးကို ထိန်းသိမ်းခြင်း။
မျိုးတူချင်းတွေ့ဆုံရာတွင် နှုတ်ခွန်းဆက်သသည့် အပြုအမူမျိုးဆန်သည့် လုပ်ဆောင်မှု။
လက်ရှိ အခြေအနေကို သိရှိစေရန်ပေးပို့ခြင်း (ဥပမာ။ အစာကျွေးခြင်း၊ အန္တရာယ်အချက်ပေးခြင်း၊ ချစ်ရည်လူးခြင်း)
၎င်းတို့၏ အုပ်စုကို ထိန်းသိမ်းခြင်း (ဥပမာ။ အမ နှင့် အထီးများအကြား ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုများ)၊
မြေမျက်နှာသွင်ပြင် တည်နေရာ အချက်အလက်ပေးခြင်း၊
သားကောင်အရင်းအမြစ်များ၏ တည်နေရာ အချက်အလက် ပေးခြင်း။
ဝေလငါးပြာ၏ ဦးခေါင်းခွံအရွယ်အစား ၁၉ ပေ (၅.၈ မီတာ)
မိခင်ဖြစ်သူနှင့် အတူတွေ့ရသည့် မွေးစအရွယ် ဝေလပြာ တစ်ကောင်
တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်ရှိသော အရွယ်ရောက်ပြီး ဝေလငါးပြာများ အရေအတွက်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် စာရင်းအရ ၅၀၀၀ မှ ၁၅၀၀၀ ထိ ဖြစ်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ကမ္ဘာ့တောင်ဘက်ခြမ်း ဒေသများတွင် ၎င်းတို့ကို ၁၉၃၉ ခုနှစ်မှစတင်၍ ကာကွယ်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတကာ ဝေလငါးဖမ်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ကွန်ဗင်းရှင်းအရ မြောက်အတ္တလန္တိတ်တွင် အပြည့်အဝ ကာကွယ်မှုပေးခဲ့သည်။ ဤကာကွယ်မှုဧရိယာအား ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် အန္တာတိကတိုက်ဘက်သို့ တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး ၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် မြောက်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာသို့ တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ မြောက်အတ္တလန္တိတ်၌ အပြာရောင်ဝေလငါးများ၏ ကာကွယ်မှု အခြေအနေကို အိုက်စလန်နိုင်ငံမှ ၁၉၆၀ ခုနှစ်အထိ အသိအမှတ်မပြုခဲ့ပေ။
↑ Reilly, S. B. (2018). "Balaenoptera musculus". IUCN အနီရောင်စာရင်း 2018. doi:10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T2477A9447146.en.
↑ Species Profile။ 21 July 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Part 17 – Conservation of Endangered Species and Other Fish or Wildlife (First List of Endangered Foreign Fish and Wildlife as Appendix A)။ U.S. Fish & Wildlife Service (2 June 1970)။ 17 January 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Photographic identification of the blue whale (Balaenoptera musculus) in the Gulf of St. Lawrence, Canada" (1990). Reports of the International Whaling Commission 12: 335–342.
↑ ၅.၀ ၅.၁ "Insights into the population structure of blue whales in the Eastern North Pacific from recent sightings and photographic identification" (2009). Marine Mammal Science 25 (4): 816–832. doi:10.1111/j.1748-7692.2009.00298.x.
↑ Sears, R.; Perrin, W. F. (2009)။ "Blue whale (Balaenoptera musculus)"။ in Perrin၊ W. F.; Würsig၊ B.; Thewissen၊ J. G. M. (eds.)။ Encyclopedia of marine mammals။ San Diego, CA: Academic Press။ pp. 120–124။
↑ "Photographic identification of the blue whale (Balaenoptera musculus) in the Gulf of St. Lawrence, Canada" (1990).
↑ "A new classification method to simplify blue whale photo-identification technique" (2012). Journal of Cetacean Research and Management 13 (1): 79–84.
↑ "Antarctic killer whales make rapid, round-trip movements tosubtropical waters: Evidence for physiological maintenance migrations?" (2011): 274–278.
↑ "Whale killers: prevalence and ecological implications of killer whale predation on humpback whale calves off Western Australia" (2015). Marine Mammal Science 31 (2): 629–657. doi:10.1111/mms.12182.
↑ "Why do baleen whales migrate?" (1999). Marine Mammal Science 15 (4): 1228–1245. doi:10.1111/j.1748-7692.1999.tb00887.x.
↑ "Why do baleen whale migrate? A response to Corkeron and Conner." (2001). Marine Mammal Science 17 (2): 432–436. doi:10.1111/j.1748-7692.2001.tb01289.x.
↑ "Foods of baleen whales in the northern Pacific" (1957). Scientific Reports of the Whales Research Institute 12: 33–89.
↑ "An integrated approach to the foraging ecology of marine birds and mammals" (1998). Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 45 (7): 1353–1371. doi:10.1016/S0967-0645(98)00031-9. Bibcode: 1998DSRII..45.1353C.
↑ "Behavioral context of call production by eastern North Pacific blue whales" (2007). Marine Ecology Progress Series 330: 269–284. doi:10.3354/meps330269. Bibcode: 2007MEPS..330..269O.
↑ "Marine mammals and noise" (1995). Academic Press.
↑ "The blue whale" (1979). Biologist 26: 209–215.
↑ "Increase rates in severely depleted stocks of baleen whales" (1993). ICES J. Mar. Sci. 50 (2): 169–186. doi:10.1006/jmsc.1993.1018.
↑ "Operational factors of the Icelandic large whale fishery" (1988). Reports of the International Whaling Commission 38: 327–333.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အပြာရောင်ဝေလငါး&oldid=728316" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၃:၅၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။